Arcturus: inona izany, toetra, tantara ary mahaliana | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 05/01/2022 10:00 | astronomia
Amin'ny alin'ny lohataona sy fiandohan'ny fahavaratra, ny mpandinika rehetra any amin'ny ila-bolantany avaratra amin'ny tany dia hahita kintana mamirapiratra eny amin'ny lanitra, avo: voasary misongadina, matetika no diso ho an'ny Mars. dia Arcturus, ilay kintana mamirapiratra indrindra ao amin'ny antokon-kintana Bootes. Fantatra fa izy io no kintana mamirapiratra indrindra any amin'ny avaratra selestialy manontolo.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Arcturus, ny toetrany ary ny fahalianana.
1 Arcturus, kintana mamirapiratra indrindra any amin'ny avaratra selestialy manontolo
2 Ny endri-javatra Arcturus
3 Kintana vahiny
4 Tantara sasany
Arcturus, kintana mamirapiratra indrindra any amin'ny avaratra selestialy manontolo
Tombanan’izy ireo fa kintana goavam-be i Arcturus izay mampitandrina ny amin’izay hitranga amin’ny masoandro ao anatin’ny 5 lavitrisa taona eo ho eo. Ny haben'ny Arcturus dia vokatry ny fihodinan'ny kintana anatiny, izay vokatry ny fahanterana. Ny 90% amin'ny kintana hitantsika eny amin'ny lanitra dia tsy mila manahy afa-tsy ny hanao zavatra iray: manova ny hidrôzenina ho helium. Rehefa manao izany ny kintana, dia milaza ny astronoma fa ao amin'ny "faritra filaharana lehibe" izy ireo. Ny masoandro ihany no manao izany. Na dia ny mari-pana amin`ny ambonin`ny masoandro latsaky ny 6.000 degre Celsius (na 5.770 Kelvin raha marimarina kokoa), mahatratra 40 tapitrisa degre ny mari-pana fototra, izay vokatry ny fihetsiky ny fusion nokleary. Mitombo tsikelikely ny nucleus, manangona hélium ao anatiny.
Raha miandry 5 lavitrisa taona isika, dia hitombo ny faritra anatiny amin'ny masoandro, ny faritra mafana indrindra, ka hanitatra ny sosona ivelany toy ny balaonina mafana. Ny rivotra mafana na ny entona dia hibodo boky lehibe kokoa ary ny masoandro dia hivadika ho kintana goavam-be mena. Raha jerena ny faobeny, Arcturus dia manana boky lehibe. Ny hakitroka dia latsaky ny 0,0005 ny hakitroka ny masoandro.
Ny fiovan'ny lokon'ny kintana miitatra dia noho ny zava-misy fa ny nucleus ankehitriny dia voatery manafana faritra lehibe kokoa, izay toy ny comet miezaka ny hanafana in-jato amin'ny burner iray ihany. Noho izany, mihena ny mari-pana amin'ny tany ary mivadika mena ny kintana. Ny hazavana mena dia mifanitsy amin'ny fihenan'ny mari-pana eo amin'ny 4000 Kelvin eo ho eo na latsaka. Ny mari-pana amin'ny mari-pana amin'ny Arcturus dia 4.290 degre Kelvin. Ny spektrum Arcturus dia tsy mitovy amin'ny Masoandro, fa tena mitovy amin'ny tara-masoandro. Ny masoandro dia faritra "mangatsiaka" amin'ny Masoandro, noho izany dia manamafy izany fa kintana somary mangatsiaka ny Arcturus.
Ny endri-javatra Arcturus
Rehefa mivelatra haingana ny kintana iray, dia hanome kely ny tsindry amin'ny fanerena ny fotony, ary avy eo dia "hikatona" vetivety ny afovoan'ny kintana. Na izany aza, ny hazavana avy amin'ny Arcturus dia nazava kokoa noho ny nantenaina. Ny olona sasany dia miloka fa midika izany fa ny nucleus dia "averina" amin'ny alàlan'ny fampifangaroana helium ho karbaona. Eny ary, miaraka amin'ity ohatra ity, dia efa fantatsika ny antony mahatonga ny Arcturus be dia be: ny hafanana dia mampitombo azy io. Ny Arcturus dia efa ho in-30 heny noho ny an'ny masoandro, ary mahagaga fa saika mitovy amin'ny Astro Rey ny vesany. Tombanan’ny hafa fa nitombo 50% monja ny kalitaony.
Raha ny teoria, ny kintana iray izay mamokatra karbaona avy amin'ny hélium amin'ny fanehoan-kevitry ny fusion nokleary dia zara raha mampiseho hetsika magnetika toy ny masoandro, fa ny Arcturus dia mamoaka taratra X malefaka, milaza fa manana satroboninahitra an-kolaka entin'ny andriamby.
Arcturus dia an'ny halo amin'ny Milky Way. Ny kintana ao amin'ny halo dia tsy mihetsika ao amin'ny sambon'ny Milky Way toy ny masoandro, fa ny orbitny dia ao anaty fiaramanidina mitongilana be miaraka amin'ny lalana mikorontana. Mety hanazava ny fihetsehanany haingana eny amin'ny lanitra izany. Ny masoandro dia manaraka ny fihodinan'ny Milky Way, fa i Arcturus kosa tsy manaraka ny fihodinan'ny Milky Way. Nisy nanamarika fa mety ho avy amin'ny vahindanitra hafa i Arcturus ary nifandona tamin'ny Voie lactée 5 lavitrisa taona mahery lasa izay. Farafahakeliny 52 kintana hafa no hita ao amin'ny orbitra mitovy amin'ny Arcturus. Izy ireo dia fantatra amin'ny anarana hoe "Arcturus group".
Isan'andro dia manakaiky kokoa ny rafi-masoandro misy antsika i Arcturus, saingy tsy manakaiky izany. Manodidina ny 5 kilometatra isan-tsegondra izany ankehitriny. Antsasaka tapitrisa taona lasa izay, dia kintana fahenina amin'ny habeny izay saika tsy hita maso, ankehitriny mizotra mankany Virgo amin'ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 120 kilometatra isan-tsegondra.
Bootes, El Boyero, dia antokon-kintana avaratra mora hita, tarihin'ny kintana mamirapiratra indrindra ao amin'ny antokon-kintana Ursa Major. Ny ankamaroan'ny olon-drehetra dia mahafantatra ny endriky ny sifotra eo anelanelan'ny hazondamosin'ny Big Dipper sy ny rambony. Ny tahon'ity vilany ity dia manondro ny lalana mankany Arcturus. Izy io no kintana mamirapiratra indrindra amin'io lalana io. Misy mpankafy "vaovao" mino fa misy ny Arcturians, hazakazaka vahiny mandroso ara-teknolojia. Na izany aza, raha nisy rafitra planeta mihodidina an'io kintana io, dia efa ela no hita.
Ny Arcturus dia manafana ny tany toy ny afo mirehitra amin'ny halavirana 8 kilometatra. Nefa aoka tsy hohadinoina fa efa ho 40 taona fahazavana avy amintsika izany. Raha solointsika Arcturus ny masoandro, dia ho 113 heny ny hamirapiratra kokoa ny masontsika ary hafana haingana ny hoditsika. Raha atao amin'ny taratra infrarouge izany dia hitantsika fa avo 215 heny noho ny masoandro izany. Raha ampitahaina amin'ny famirapiratany hita maso (habe), dia tombanana ho 37 taona hazavana miala ny Tany izy io. Raha misy ifandraisany amin'ny taratra eran-tany ny hafanan'ny tany, dia tombanana ho 36 tapitrisa kilometatra ny savaivony, izay avo 26 heny noho ny Masoandro.
Arcturus no kintana voalohany hita mandritra ny andro miaraka amin'ny fanampian'ny teleskaopy. Ny astronoma nahomby dia Jean-Baptiste Morin, izay nampiasa teleskaopy kely refracting tamin’ny 1635. Afaka mamerina amim-pitandremana ilay andrana isika, ka misoroka amin’ny vidiny rehetra ny hanondro ny teleskaopy manakaiky ny masoandro. Ny daty voatondro hanandrana ity hetsika ity dia ny volana oktobra.
Raha ny kintana ambadika no resahina, dia miavaka ny fihetsik'i Arcturus - 2,29 santimetatra isan-taona. Anisan'ireo kintana mamirapiratra Alpha Centauri ihany no mihetsika haingana kokoa. Ny voalohany nahatsikaritra ny fihetsik'i Arcturus dia i Edmond Halley tamin'ny taona 1718. Misy zavatra roa mahatonga ny kintana haneho ny fihetsehan'ny tenany manokana: ny tena hafainganam-pandehany raha oharina amin'ny manodidina azy sy ny akaiky azy amin'ny rafi-masoandrontsika. Mahafeno ireo fepetra roa ireo i Arcturus.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Arcturus sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » astronomia » Arcturus